Semalt: Zvose Pamusoro pePishing Scam And Spams
Kugamuchira mishumo inoshungurudza uye zviziviso mu email yako neposipi bhokisi zvinogona kuvhiringidza chaizvo. Mamwe emishumo ye email inotumirwa ku email yako inoita kuti iwe uomerwe kuendeswa pasi ne hacker hacker. Nzvimbo yose yehutano yewebhu inogona kutorwa pasi nekukanda sms email, kazhinji inonzi yakashambadza mail - подключение точка-точка wifi. Junk emails anotungamira makombiyuta ekupedzisira kumakombiyuta akaipa, kwaanoshandiswa nyore nyore nezvikwereti zvakafanana. Nzvimbo yekuchengeteka yepawebsite yako ndiyo inofanira kutanga iwe.
Paunenge uine chikamu chekunyengedzera kwepishing, mharidzo ye spam uye emaimeri zvinoshandiswa zvikuru. Phishing scam inoshandisa vashandisi vepakombiyuta kuti vakwanise kubatana kunoda kubhadhara mashoko avo ebhengi mamwe mashoko.
Julia Vashneva, iyo Semalt Mutungamiriri Mukuru weVatengi vanobudirira, anokunyevera kuti vashambadzi vanosvika kune nhamba yakawanda yevashandi vepakombiyuta kuburikidza kutumira nhamba yakawanda ye emaimeri nechinangwa chekuzadzisa zvinotevera:
Kuparadzira kutyisidzira uye malicious malware
Kuita kunze kwekunyengedzera kwechinangwa nechinangwa choga chokuwana mari yekwereti yekwereti uye account passwords
Kuita madhora kubva kuvashandi vePC vanopindura mishumo yavo
Mazano ekuzvidzivirira kwako kubva kunezvinyorwa zvepenzi uye spam emails
Vanoshandisa pakombiyuta vanogona kuderedza nhamba ye spam emails yakatumirwa kwavari ne spammers nekushandisa mazano anotevera akaiswa ne Semalt vashandi.
Kutora pamusana we email email
Public email address inonyanya kushandiswa kukurukura nekunyora kumaforamu evaruzhinji. Vashandi vepakombiyuta vachishandisa iyi kero ye email vanogona kuderedza nhamba ye ema spam emails vachishandisa nhamba yakasiyana yeameri ye email, kuchinja kero ye email yevoruzhinji kazhinji, nekushandisa maeteri e-email kwekanguva.
Kuchengetedza ma browsers akavandudzwa
Kushandisa shanduro dzekutsvaga dzeveku browsers kunobatsira kudzivirira spammers kubva kukutumira huwandu hwemajeri emajeri. Shanduro dzinovandudzwa dzinoona mhinduro dze spam nyore nyore kana dzichienzaniswa neshanduro dzakabuda musi.
Kushandisa pachedu email mazita
Tsamba yako yega yekero inofanira kushandiswa pamusana pekuvanza. Your name and password combination should be strong enough to discourage hackers from guessing. Kushandisa vashandi kuti vachengetedze pakombiyuta yenyu kuchengetedza kunoita kuti iwe uve panzvimbo yakanaka yekuti urege kungozvidzivirira kuvharwa asi nekudzivirirawo spammers kuti urege kuwana majeri emajeri nguva nenguva.
Funga kushandisa zvinopesana nezvisarudzo
Kushandisa kombiyuta ine-anti-malware yakachengetwa inobatsira kudzivirira spammers kubva kukutumira spam emails. Shandisa premium anti-malware version ne-anti-spam zvisarudzo uye zvidziviriro zvekuchengeteka.
Kugamuchira mazita emajeri zvese zvingava dambudziko rakadaro. Kuchengeta kombiyuta yako zvakasangana ne premium anti-malware zvinyorwa ndiyo ndiyo nzira yakanakisisa yekuenda nayo. Dzivisa kuvhara maimeri pasina kuongorora kubvumirana kweomutumi kuti ave wakachengeteka. Kuti kuderedze nhamba ye spam emails yakatumirwa kwauri ne spammers, rega kupindura kune zvisina kumira maimeri, uye usadzike kuvhara kusazvinyora kwemashoko emaily anotumwa nevashori. Kuchinja email yako kero kakawanda kunoshanda zvakare. Kushanda ne imwe kero ye email kune ngozi yakawanda kumushandi wekushandisa kombiyuta. Nokuda kweizvi, spammers vanoenderera mberi nekufungidzira kwekubatana vachiri kuedza kutora chekushandura.